ubhubhane lunyakazise izimeya zamadolobha amancane - Ilanga News
Home Izindaba ubhubhane lunyakazise izimeya zamadolobha amancane
ubhubhane lunyakazise izimeya zamadolobha amancane
LONA nguSinothile Mdluli umndeni wakhe osola ukuthi udlwenguliwe ngaphambi kokuba abulawe njengoba isidumbu sakhe sitholwe silenga esihlahleni, siboshwe ngeduku.
UKUTHELEKA emakhaya kwalabo abahlala esilungwini njengoba kuhlasele umkhuhlane weCorona kuleli, sekusukumise omasipala basemakhaya nezinhlelo zokuzama ukuvikela imiphakathi ngezi-nsiza njengoba besovalweni lokuthi kungahanqeka izaguga emakhaya.
Izolo imeya yasoNdini, uMnu Wilson Ntshangase, uhambele enkabeni yedolobha ekhipha izinto zokugeza izandla. Lokhu kulandela umyalelo kahulumeni onxenxa abantu ukuba bahlale behlanzekile futhi bagonqe izinsuku eziwu-21.
Lo mkhankaso wenzeka kakhulu emakhaya njengoba kuholwa impesheni nezibonelelo zikahulumeni, kwazise kuphele inyanga.
Imeya ithi kunzima kakhulu emakhaya njengoba kutheleke amalungu emindeni ehlukahlukene aphuma esilungwini, okungaziwa noma abesenaso yini lesi sifo. Ithi yingakho beqale umkhankaso wokunikela ngezinsiza zokuhlanza izandla.
“Kusekhona ingcosana engakalutholi ulwazi olwanele ngezinto okumele zenziwe ukuvikela ukuthelelana ngalesi sifo. Lokho kusabonakala ngokuthi ezinye izaguga kunzima nokuzigcoba,” kusho uMnu Ntshangase. Uthi okugqamayo wukuthi umphakathi wakule ndawo kawukayiboni le ngozi, yingakho behla benyuka belekelela.
Ngakolunye uhlangothi, imeya yaseNkandla, uMnu Thamsanqa Ntuli, nayo beyehla yenyuka ngo-Lwesibili iqinisekisa ukuthi nezitolo ezinkulu ezisedolobheni laseNkandla kaziyenyusi intengo yokudla. Imeya iqwashise umphakathi wendawo ngobungozi be-coronavirus nokuthi uma ingena kumuntu oyedwa emndenini, ingawubhuqabhuqa wonke, kuva-lwe ngehlahla.
“Uma abantu sebeyiholile imali yabo, sithi mababuyele emakhaya, bahlale phansi kuze kuphele lezi zinsuku esinikwe zona. Umasipala waseNkandla uyibeka phambili impilo yabantu bawo. Siyasazi isimo sokuthi eminye imindeni kayinawo amandla, yingakho-ke silekelela,” kusho uMnu Ntuli.
Uthi umasipala wakhe uthathe isinqumo sokuqinisekisa ukuthi umphakathi unazo izinsiza zokuhlanza izandla. Imeya yaseMsinga, uNkk Buyiswa Ngcobo, wenze okufanayo emadolobheni aseMsi-nga. Uthi izindawo zasemakhaya zisalubukela kude lolu bhubhane.
“Sinovalo kakhulu lokuthi emakhaya sekufike nabahlala eGoli, manjeke sifuna ukuqinisekisa ukuthi imindeni inakho konke okudingekayo,” kusho uNkk Ngcobo.
Imeya ivakashele emarenke ePomoroy, ezitolo ezinkulu zokudla nalapho kudayisa khona omama ukudla.
Previous articlei-corona igadle kwezwela kubalimi abampisholo
Next articleIphoyisa ehlazweni lemoto yokwebiwa